दुई पाङ्ग्रे सवारीमा व्यापक कर कटौती, कुन मोटरसाइकलको कति मूल्य घट्यो ? – Sapana Sanjal
दुई पाङ्ग्रे सवारीमा व्यापक कर कटौती, कुन मोटरसाइकलको कति मूल्य घट्यो ?
June 3, 2021 283
Sapana Sanjal : सरकारले बजेटमार्फत दुई पाङ्ग्रे सवारीमा लाग्ने करको दरमा व्यापक हेरफेर गरेको छ । गत शनिबार अध्यादेशमार्फत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट ल्याएको सरकारले दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनमा लाग्ने सडक दस्तुरमा अधिकतम १ लाख सम्मको छुटको घोषणा गरेको हो ।
नेपाली बजारमा ४०१ सीसी भन्दा माथिका मोटरसाइकल थोरै मात्र बिक्री भए पनि यस्ता मोटरसाइकल रुचाउने ग्राहकका लागि भने यसले केही राहत दिनेछ । बाइक आयातकर्ता कम्पनीहरुले सिधै १ लाख रुपैयाँ नघटाए पनि आगामी दिनमा यी बाइक किन्दा केही सहुलियत भने अवश्य प्रदान गर्नेछन् । यद्यपि यो छुट भने ४ सय सिसी इन्जिन क्षमता माथिका मोटरसाइकल र विद्युतीय दुई पाङ्ग्रे सवारीमा मात्र गरिएको हो ।
सामान्यतः बिग बाइक भनिने यस्ता बाइकका पारखीहरु पनि नेपालमा प्रशस्तै छन् । २०७७ चैतको अन्तिम सातामा बेनेली ब्रान्डको ७०२ एस बाइक नेपाली बजारमा भित्रियो । यो बाइकको मूल्य नै २५ लाख १५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । नेपाली बजारमा भित्रिएका बाइक मध्ये २०७७ सालमा भित्रिएको सायद यो नै अन्तिम महंगो बाइक हुन सक्छ । बेनेलीको यस्तै अर्को महंगो बाइक ६००आई हो । यसको मूल्य २३ लाख ५८ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । आगामी दिनमा यी दुवै बाइकको मूल्यमा अब केही परिमार्जन हुन सक्छ ।
नेपाली बजारमा यस्ता महंगा बाइक प्रशस्तै छन् । गत वर्ष नै यामाहाका ३ मोडल भित्रिए । यामाहाको टीम्याक्स स्कुटर सहित एमटी ०९ र आर६ प्रत्येकको मूल्य नै ३५ लाख रुपैयाँ छ । त्यसैगरी होन्डाको सीबीआर ६०० आरआरको मूल्य ३४ लाख ५० हजार र सीबी ४०० को मूल्य २२ लाख ७५ हजार रुपैयाँ छ ।
नेपाली बजारमा बिक्रीका लागि उपलब्ध बाइक मध्ये एमभी अगस्टाका बाइक पनि निकै महंगा छन् । एमभी अगस्टाको ड्रयागस्टर ८००आरआर–पिरेलीको मूल्य ६१ लाख ९० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । एमभी अगस्टाका अन्य बाइक पनि महंगा नै छन् ।
विश्वमै सबैभन्दा महंगो ब्रान्ड मानिने हार्ले डेभिडसनका बाइक समेत नेपाली बजारमा पाउन सकिन्छ । नेपाली बजारमा हाल हार्ले डेभिडसनका स्ट्रिट ७५०, स्ट्रिट रड ७५० र आइरन ८८३ बाइक उपलब्ध छन् । यी बाइकको मूल्य क्रमशः २३ लाख, २७ लाख र ४० लाख रुपैयाँ छ । यद्यपि अब कसैले माग गरेमा मात्र यी बाइक बिक्रीका लागि आयात गरिने बताइएको छ ।
नेपाली बजारमा यतिबेला यी वाहेक डुकाटीले मोन्स्टर, प्यानीगेल भी ४ बाइक बेचिरहेको छ । यी बाहेक अन्य केही कम्पनीले पनि महंगा र ठूला बाइक नेपाल भित्र्याइरहेका छन् । यद्यपि यस्ता महंगा मोटरसाइकलको कर आगामी साउन पश्चात मात्र परिवर्तन हुनेछ । यो भन्दा अगाडि नै नेपाल भित्रिएका बाइक नेपाली बजारमा प्रशस्तै संख्यामा स्टक रहेका हुन सक्छन् । आगामी दिनमा कम्पनीहरुले अहिलेको मूल्यमा परिमार्जन गर्छन् वा गर्दैनन् भन्ने कुरा उनीहरुको व्यापारिक नीतिमा भर पर्नेछ ।
Prevकाठमाडौं उपत्यकामा सवारी साधनको लागि जारि गर्यो यस्तो नियम
Nextगर्भवती भएको भन्दै बधाई खाएर हस्पिटल जाँदा जब उनको पेटमा डाक्टरले भेटायो यस्तो चिज जस्ले सबैलाई बनायो चकित
सुन्दा अचम्म लाग्ला तर यो सत्य हो, पल शाहले गरे विबाह ! को हुन् त बेहुली? (भिडियो सहित)
पाथिभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, श्रावण ५ गते मंगलबार, तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
फेरि अर्को खतरनाक नयाँ ‘भेरिएन्ट’ भेटियो , खोप लगाएका मानिसलाई पनि पुनः संक्रमण हुन सक्ने